इजी ओभन भुटेको आलु Make बनाउन सजिलो! - व्यंजनहरु
बेकन मा लपेटिएको एयर फ्राइड scallops
म कन्टेन फ्लेक्सको साथ के बनाउन सक्छु
कुनै बेक कुञ्जी लाइम पाई रेसिपी ईगल ब्रान्ड छैन
कसरी एक ह्याम भिडियो स्कोर गर्ने
बाहिर क्रिस्प र भित्रबाट शराबी, भुटेको आलु एक सजिलो साइड डिश हो जुन कुनै पनि खानासँगै जान्छ!
तपाईंको मसलाको कपाटमा के छ वा तपाईंको बगैंचामा कुन जडीबुटीहरू बढ्दैछन् भन्नेमा आधारित तपाईंको मनपर्ने मौंसाहरू थप्नुहोस्!
ढिलो कुकरमा goulash को लागि व्यंजनहरु
यी ओभन-भुने आलु हुन् धेरै सजीलो बनाउन , ताकि तपाईं कम से कम काम संग एक स्वादिष्ट साइड डिश पाउन सक्नुहुन्छ!
तपाईं सुख्खा जडिबुटीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईंसँग हातमा ताजा छ भने, सबै प्रकारले, तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्! मलाई थाहा छ कि उच्च तापक्रमले ताजा लसुनलाई जलाउन सक्छ ताकि भुनेको आलु एक मात्र स्थान हो जुन मलाई वास्तवमै ताजाको ठाउँमा लसुन पाउडर प्रयोग गर्न मनपर्दछ।
यी सजीलो भट्टी आलुहरूमा सिसनिंगको साथ सिर्जना गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्, तिनीहरू धेरै धेरै केहि संग महान जान !
चिली पनीर फ्राइजको साथ के हुन्छ
कस्तो प्रकारको आलु प्रयोग गर्ने
पूर्ण रूपमा इमान्दार हुन, तपाईं रातो छाला, रसेट, युकोन सुन र पनी सहित भुँइमा कुनै प्रकारको आलु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सखरखण्डा ।
छुन वा छील छैन? जब तपाईं पोलेको भन्दा पहिले आलुको बोक्रा काट्न सक्नुहुन्छ, तपाईंले निश्चित रूपमा ती पिल गर्नु आवश्यक पर्दैन! म व्यक्तिगत रूपमा रसट वा आईडाहो आलुहरू बाट स्वादको स्वाद मन पराउँछु र मलाई रातो छालाको आलुको लुक र रंग पनि मन पर्छ!
यदि तपाईं सानो आलु प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने, तपाईं तिनीहरूलाई आधा काट्न सक्नुहुन्छ वा यदि तिनीहरू सानो छ भने, तपाईं मात्र एक काँटा वा चक्कु संग एक सानो प्रहार गर्न सक्नुहुन्छ बेकिaking पहिले वाफ मा उम्कन अनुमति दिन।
कसरी आलु भुल्ने
म धेरै प्रेम गर्छु दुई पटक पकाएको आलू , ओभन-भुटेको आलु बनाउने यति अविश्वसनीय सरल छ कि यो मेरो गो-टु साइड डिश हो!
मेरी आमाले मलाई काटेको आलुहरू भिजाउन सिकाउनुभयो यदि समयले अनुमति दिन्छ भने यसले केही स्टार्चलाई हटाउछ र तिनीहरूलाई भित्र फुल्न सक्ने अवस्थामा कुरकुराउन मद्दत गर्दछ। तपाईंले जैतुनको तेल थप्नु अघि तिनीहरूलाई राम्ररी सुकाउन नबिर्सनुहोस् ताकि तिनीहरू भापको सट्टामा भुलिन्छन् !!
आलु धुनुहोस् र काट्नुहोस् १ ″ क्युब्समा।
भिज्नु चिसो पानीमा १ 15-२० मिनेट (वैकल्पिक) मा।
ओभन धेरै तातो तापक्रममा गरम गर्नुहोस्।
जैतूनको तेल, मसाला, र जडिबुटीहरू जोड्नुहोस् (प्रति नुस्खा तल) र टेन्डर सम्म भुना।
म्यापल सिरपको साथ मीठो आलु र स्याउ क्यासरोल
कति समयसम्म भुल्ने
भुटेको आलु बनाउनुको बारेमा उत्तम कुरा यो हो कि तपाइँ तिनीहरूलाई कुनै पनि तापक्रममा भाँडा तिर्न सक्नुहुन्छ र ती भन्दा पकाउनको लागि धेरै छिटो हुन्छ। उसिनेको आलु । मैले उच्च तापक्रमलाई क्रिस्पी बाहिरी र फ्लफि इन्टीरियरको लागि उत्तम परिणामहरू फेला पारेको छु।
आलु भुटेको के तापक्रम
म प्राय: potatoes२5 डिग्री फारेन्युमा आलुहरू भुल्दछु किनकि मलाई माया छ कि यसले कसरी बाहिरबाट चिप्लन्छ। भट्टीमा अरू के जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा निर्भर गर्दै, यदि आवश्यक परे तपाई कम अस्थायीमा आलु पकाउन सक्नुहुनेछ (तर तपाईंलाई लामो बेकि time समय चाहिन सक्छ)।
निम्न कुक समयहरू १ ″ आलु क्युब्सका लागि हुन्:
45-50 मिनेट को लागी 350 ° F मा बेक गर्नुहोस्।
5 35-40० मिनेट को लागी5375 ° एफ मा बेक गर्नुहोस्।
Minutes० मिनेट को लागी °०० ° F मा बेक गर्नुहोस्।
20-25 मिनेट को लागी 450 ° F मा बेक गर्नुहोस्।
बायाँ पाल्नेहरू तताउने पनमा वा ओभनमा राम्रोसँग गरम गरिन्छ। तिनीहरू एक मा पूर्ण छन् आमलेट वा एक महान सर्टकट को लागी को लागी बिहानको खाजा , hashbrowns को रूपमा वा क्यासरोलहरूमा!
भाँडामा कसरी फूल फुल्ने फूल
के तपाईं भुनी आलु फ्रिज गर्न सक्नुहुन्छ? हो! जबकि उनीहरू ठ्याक्कै सोचिरहेको चीज नै होइनन्, तिनीहरू वास्तवमै राम्रोसँग स्थिर गर्दछन्! म तिनीहरूलाई फ्रिजर झोलामा राख्छु र चुलो स्टोभमा पनी तावामा (वा टोस्टर ओभन) मा फेरि गरम गर्दछु। म तिनीहरूलाई मात्र प्यानमा प्यानमा थप्दछु ओभन पकाइएको चिकन स्तनहरू सजिलो हप्ताको भोजनको लागि!
यी भुनी आलुको सेवा दिनुहोस् ...
सजिलो ग्रील्ड चिकन स्तन
उत्तम गोमांस भुन
बिस्तारै कुकर तान्ने पोर्क
क्रक पट पोर्क चप्स
वा टॉपपिंग्स थप्नुहोस्:
खट्टा क्रीम (वा एक स्वस्थ मोड़ को लागी ग्रीक दही)
चाइभ्स वा प्याज
मनपर्ने आलु रेसिपीहरू
सर्वश्रेष्ठ म्यास गरिएको आलु
आलु Arat Gratin
दुई पटक पकाएको आलु केसरल लोड भयो
लोड गरिएको मैश आलु केक
के तपाईंले यी ओभन भुटेको आलुको आनन्द लिनुभयो? निश्चित गर्नुहोस् रेटिंग र कमेन्ट तल छोड्नुहोस्!
ओभन भुटेको आलु
तयारी समय१ घण्टा । मिनेट कुक समय० मिनेट कुल समय१ घण्टा 35 मिनेट सर्भिंगहरू6 सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन ओभन भुटेको आलु एक सजिलो साइड डिश हो जुन कुनै पनि धेरै खानाको साथ जान्छ! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢दुई पाउन्ड रातो वा पहेंलो छालाको आलु
▢१ चम्मच लसुन पाउडर
▢3 चम्मच ताजा जडिबुटी काटिएको (रोझमेरी, अजमोद, थाइम, तुलसी)
▢स्वाद गर्न मोटा नुन र खुर्सानी
He२5 डिग्री सेल्सियसको लागि तापो ओभन।
आलु स्क्रब गर्नुहोस् (ती छाल नलगाउनुहोस्)। पासा १ 'क्युबमा।
यदि समयले अनुमति दिन्छ भने आलुहरू चिसो पानीमा १ घण्टा सम्म भिजाउनुहोस्। (यसले स्टार्च हटाउँदछ र फ्लफियर आलुको लागि बनाउँछ)। ड्रेन र सुक्खा आलु, यदि आवश्यक छ भने।
टस आलु, जैतुनको तेल, जडिबुटी, र मौसम
एक बेकिंग पानामा राख्नुहोस् र ब्राउन र टेंडर नभएसम्म -3०--35 मिनेटसम्म बेक गर्नुहोस्।
तपाईले मनपराउनु भएका जडिबुटीहरूको कुनै पनि संयोजन प्रयोग गर्नुहोस्। सुख्खा मसला / जडिबुटी प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, ताजाको स्थानमा १-२ चम्मच सुख्खा जडिबुटी प्रयोग गर्नुहोस्। कुनै पनि प्रकारको आलुहरूले यस विधिमा काम गर्दछ र आलु बोक्रा छान्नु वैकल्पिक हो।
क्यालोरिज:१77,कार्बोहाइड्रेट:24g,प्रोटिन:दुईg,मोटो:।g,सोडियम:२मिलीग्राम,पोटासियम:7 687मिलीग्राम,फाइबर:दुईg,चिनी:१g,भिटामिन ए:१०IU,भिटामिन सी:१मिलीग्राम,क्यालसियम:पन्ध्रमिलीग्राम,फलाम:१.१मिलीग्राम
कीवर्डसजिलो भुटेको आलु, भुटेको भुटेको आलु, भुटेको आलु कोर्सअतिरिक्त खाना पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।